UJustin Thomas: Ibali leNye yeGalati yeNkwenkwezi eziPhakamileyo
Ngama-5-foot-10-145, iipounds eziyi-145, u-Justin Thomas ungomnye wezona zixhobo ezinkulu zegalufa-mhlawumbi i-hit-pound hitter. Kwaye ngo-2017, ngonyaka ophumayo owawuquka iinqununu ezintlanu kunye nomqhubi wakhe wokuqala weqhawe lokuphanga, uTromas 'iprofayili yoluntu yavela ekubeni yiJordan i-Spieth kuphela nje ebantwini abanamakhono amaninzi, njengeSpieth, enye yeenkwenkwezi ezincinci zeemidlalo.
UThomas 'Tour Wins
I-PGA Tour: 8 (iintlawulo zibhalwe ngezantsi)
Amabhaso kunye neNhlonipho ngoJustin Thomas
I-PGA Tour Player yonyaka, 2017
Umphathi we-PGA we-Tour, 2017
Ilungu, i-Team USA, i- Cup of Presidents Cup 2017
Ilungu, i-Team USA, i-2013 Walker Cup
Wazalelwa kwiNtsapho yeGalofu
UJustin Thomas wazalwa ngo-Apreli 29, 1993, eLouisville, eKentucky. Ngaba wayezimisele ukuba yi-golfer? Inyaniso yokuba uyise kunye noyise kaTomas bebonke be-PGA Professionals ngokuqinisekileyo banyukisele iingxaki ukuba uYustin ngokwakhe ngokwakhe angathatha umdlalo.
Unina kaTomas, uPaul Thomas, wadlala kwimicimbi ye- PGA Tour ngasekupheleni kweminyaka yama-1950 kwaye aqeqeshelwa ukuqhubela phambili kweengqungquthela ezintathu. Kamva waba ngumqeqeshi webhula kunye nomqeqeshi, ukufundisa, phakathi kwezinye, abaphumeleleyo beLPGA Tour uMikhele Redman noTammie Green.
Abazali bakaTomas nguMike noJani Thomas; UMike ungumdlali weqela kwiHarmony Landing eLouisville, apho uYustin wakhula edlala.
Nangona kwakusoloko kunokwenzeka ukuba, ngenxa yokuba imvelaphi yentsapho, ukuba uTomas wayeba yi-golfe, wathi abazali bakhe abazange bamqhube:
"Ndenenhlanhla ukuba ndibe nabazali abancedisayo, abazange bandichukumise; kwaye bakhule ukuze badlale loo nto. Kodwa ba ndiphatha okufanayo, nokuba ndibethe 66 noma 76. "
UJustin Thomas 'Junior kunye neGolf yeAmateur
UTomas wavuka ngokukhawuleza ekugqibeleni kwigalufa elincinane, kuquka, xa eneminyaka eyi-14, ekuphumeleleni umdlalo we-Evian Junior Masters eFransi ka-2007.
Esikolweni esiphakeme, uTomas wayengumdlali weKentucky woMnyaka ngo-2008 kunye no-2010, ukunyusa kwakhe kunye namaxesha aphezulu, ngokulandelanayo. Iqela lakhe, uSaint Xavier, walinqoba ubhankqalazo bobukhosi ngo-2008 no-2009.
UTomas wawuthatha iintambo ezintathu kwi-circuit ye-American Junior Golf Association (kwaye, emva kokuba afinyelele i-PGA Tour, waqala ukubamba umcimbi wakhe we-AJGA eKentucky). Wayekhethwa kwexesha le-Junior All-America.
Ngo-2012, uTomas waqala ukudlala igalofu yekholeji kwiYunivesithi yaseAlabama. Uphumelele umvuzo wePhil Mickelson njengomntu omtsha wonyaka, kunye ne-Haskins kunye neNicklaus, kunye noMdlali wonyaka. UTomas naye wadlala kwiqela le-USA ekulweni kwi-World Championship Championship Championship kunye ne-2013 Walker Cup.
UTomas wanquma ukushiya iikholeji aze abuyele emva kwenkathi yakhe yokuphucula i-Alabama. Kwiminyaka emibini, wazuza amanqaku ayisithandathu e-NCAA.
UTomas noSpieth: Abahlobo kunye nabaHoli
U-Justin Thomas waba ngumhlobo kunye ne-golfer edla ngokuqhelekileyo, ngaphezu kwengxenye yokuqala yomsebenzi wakhe, edibaniswe kunye no-14 ubudala, ngo-2007 umqhubi we-Evian. UTomas noJordan i-Spieth baye baba ngabahlobo ukususela ngelo xesha.
Kodwa, nangona kunjalo beminyaka efanayo, uSpies wayehlala ebonakala phambili phambi kukaTomas ekuphuhlisweni kwakhe komsebenzi. Umzekelo, njengomntwana oneminyaka engama-16 ubudala, uTomas wadlala kwindawo yakhe yokuqala ye-PGA Tour, ngowama-2009 we- Wyndham Championship , kwaye waba ngumnye wabancinci-owake wakwenza i-PGA Tour cut .
Kodwa i-Spieth yayisenzile into efanayo neenyanga ezimbalwa ngaphambili kwi-Byron Nelson Championship. Intsimbi iphendulele phambili ngaphambi kukaTomas, iphumelele kwi-PGA Tour ekuqaleni, yaphumelela iqhawe lobungakanani ngaphambili.
Ukudibaniswa nelokuba uTomas usemncinci kunokuba yiNkokeli, ezi zinto zinegalelo kwindlela "ye-Jordan's little buddy" sengqondo ngoTomas ekuqaleni.
Ngaba loo nto iphazamise uTomas? Ngaba wayeke abe nomona ngeendlela zokuhamba ngokukhawuleza kweJordan?
"Ukukhathazeka mhlawumbi akulona ilizwi elifanelekileyo," kusho uTomas. "Ukuba nomona kunene, ndiyathetha, akukho sizathu sokuyifihla." Ndifuna ukwenza oko, kwaye andingenalo. "
UTomas wayengekho, kude kube sekupheleni kwexesha le-2017 lePGA Tour.
UTomas Goes Pro, uzuze uMninimzi wakhe wokuqala
UTomas waba ngubugcisa emva kweNdebe ye-Walker ka-2013. Umdlalo wakhe wokuqala wokudlala njengeprogram yayiyiPGA Tour Frys.com Evulekileyo, ngo-Oktobha 2013, apho wafumana ukuhlawula kwakhe yokuqala ($ 9,600).
Uphumelele kanye kwi-Web.com Tour ngo-2014 waza wagqiba isihlanu kwiloluhlu lwemali. Oku kwakulungele ukufumana uTomas ikhadi lakhe lePGA Tour ngo-2015. Kwaye kuloo nyaka we-rookie, uTomas ubhale i-Top Top 10 ephelile kwaye wabeka u-32 kwi- list yee-points ze- FedEx Cup .
Ulwando lwakhe lokuqala lwe-PGA Tour olulandelayo ngo-2016, kwiCIMB Classic eMalaysia. Kwaye uTomas waphucula ukuya kwi-12 kwi-StandEx Cup.
Loo mzila ophezulu waphuhliswa waba yi-stardom ngokupheleleyo kwixesha le-2016-17 le-PGA Tour, apho uTomas wabeka ukunqoba amahlanu. Phakathi kwabo kwakunobunzima bakhe bokuqala bokuphumelela kwi- 2017 ye-PGA Championship . Kwaye uTomas waxotha umngane wakhe kunye nomdlali onobuchule ukuba aphumelele i-Dell Technologies Championship, inxalenye ye-FedEx Cup playoffs.
Ekuqaleni kuka-2017, inyanga ngaphambi kokuphumelela kwakhe, uTomas wachaza umnyaka omkhulu ukuza ngokudubula 59 kwi-Sony Open kwaye uzuze loo mqhudelwano ngamanqaku angama-253 -amanqaku aphantsi kumlando wePGA Tour .
Kwakukho ngo-2017 ukuba uTomas waqala ukuhlala oko wayekade ekhankanya njengegama lakhe: "Akukho zizathu - zidlala njengeqhawe."
Wayephelisa ixesha lexesha lomqhubi-mdlalo kwi-Tour Championship eyafumana uTomas i-FedEx Cup Trophy.
Justin Thomas Trivia
Xa uTomas ephumelele i-PGA Championship ka-2017, waba ngumntwana wesibhozo we-PGA Professional ukuphumelela ukuba kuqhutywe phambili ngumbutho wePGA Professionals.
Xa uTomas edutshulwa 59 ngo-2017 u-Sony Open, wayeyi- golfer yesixhenxe kwimbali yokutyelela ukurekhoda loo manqaku .
Ngomjikelezo wesithathu we- 2017 US Open , uTomas ukhawuleze ngamanqaku angama-63 - ngowesihlanu kuphela kumanqaku aloo mbali .
Uludwe lweeNtshontsho zikaJustin Thomas 'PGA Tour
Nantsi i-PGA Tour tournaments eyathathwa nguTomas kude kube yimisebenzi yakhe.
2017 I-Sony Vula eHawaii
2017 IPGA Championship
2017 JC Cup
Ngaphambi kokujoyina i-PGA Tour, uTomas wathola uhambo lweWeb.com ngo-2014 kwiSizwe soBantwana beZibhedlele zeZibhedlele.
Kutheni Ungaphenduli Imali Eyona Ninzi?
I-Matrix neGnosticism: Ngaba i-Matrix i-Gnostic Film?
UCharles Darwin nohambo lwakhe kwi-HMS Beagle
Gwema iMistake eqhelekileyo yesiJamani: 'Wie' Versus 'Als'
Imbali kaMnu Irrelevant kwi-Draft NFL
I-Poila Baisakh: Umnyaka omtsha waseBengali
Imfazwe ebusongweni kwiifilimu ezili-10 kuphela
IziLatin zeeLatin 1st and 2 Declension
Iimfazwe zaseGallic: iMfazwe yaseAlesia